Hoggaanka Al-Shabaab Oo Khilaaf Xoog Leh Soo Kala Dhexgalay - Awdinle Online
Hoggaanka Al-Shabaab Oo Khilaaf Xoog Leh Soo Kala Dhexgalay
March 28, 2020 (Awdinle Online) –Warbixinta Daily Nation ayaa lagu sheegay in bishii tagtay amiirka Al-Shabaab Axmed Diiriye Abu Cubeyda uu isku dayey inuu eryo madaxa sirdoonka iyo maaliyadda kooxda Mahad Karate, iyo madaxii howl-gallada dibedda Bashiir Qoorgaab, kadib markii ay isku qabsadeen cidda maamuleysa dhaqaalaha kooxda.
Dagaal salka ku haya qabyaalad iyo maamulka maaliyadda ayaa kala qeybiyey hoggaanka kooxda Al-Shabaab, sida uu qoray wargeyska Daily Nation ee Nairobi, oo sheegay in lala wadaagay warbixino sirdoon.
Warbixinada sirdoon ayaa sheegay in qabiilka ay kasoo jeedaan Karate iyo Qoorgaab ee Hawiye ay diideen in la eryo.
Laba toddobaad kadib Qoorgaab, oo Mareykanka ay sheegeen inuu mas’uul ka ahaa weerarkii saldhigga Manda Bay ee dalka Kenya, ayaa lagu dilay duqeyn ay fuliyeen diyaaradaha Mareykanka.
Warbixinta Daily Nation ayaa sheegtay in warbixino cusub oo sirdoon ay muujinayaan in geerida Qoorgaab ay kasii dartay khilaafkii iyo kala shakigii kooxda ka dhex jiray.
Horraantii March, warbixinta sirdoon ayaa sheegtay in Axmed Diiriye uu amray dilka mid ka mid ah saaxiibada Karate oo lagu magacaabay Muuse Macallin Macaawiye, oo ahaa madaxii sirdoonka gobolka Banaadir, kaasi oo lagu shirqoolay laguna dilay magaalada Bua’aale.
“Abu Cubeyda wuxuu Karate ku eedeynayaa inuu keydsanayo dhammaan lacagta canshuurta looga soo qaado beeraleyda, xoolaleyda iyo ganacsatada Muqdisho iyo goobaha kale ee Shabaab ay maamulaan. Dhinaca kale, Karate wuxuu ku doodayaa in beeshiisa Hawiye ay tahay tan ugu badan Soomaaliya, lacagta ugu badanna laga qaado, sidaas darteedna lacagta marka hore ay leeyihiin Hawiye, kadibna beelaha kale,” ayaa lagu yiri warbixinta sirdoon, sida uu qoray Daily Nation.
Ilo-wareedyada xogtan bixiyey ayaa sidoo kale sheegay in Karate uu aad uga carrooday qaraxii 14-ka October 2017 ee Zoobe, oo dadkii ku dhintay badankood ay ahaayeen beeshiisa Hawiye.
Abu Cubeyda ayaa la sheegay inay ku adkaatay inuu awoodda ka xayuubiyo Mahad Karate, sababo la xiriira nidaamka qabaliga ah oo kooxda ku xooggan.
Waxaa la sheegay inuu isku dayey inuu la xiriiro qabiillada yaryar, islamarkaana abuuro isbaheysi ka dhan ah xubnaha Hawiye ee kooxda, taasi oo weli uusan ku guuleysan.
Previous articlePatrick Cockburn“Mareykanka waxa uu luminayaa awoodda militari iyo mid dhaqaale sababo la xiriira COVID-19”.
Next articleUjeedkii Ay Ula Wareegtay Dowlada Iskuulkii 15 May Oo Ka Hadlay Wasiir Goodax